Dainik Samaj | नेप्सेमा कति अङ्कको वृद्धि ? साल्ट टेडिङको शेयरमा सकारात्मक सर्किट - Dainik Samaj नेप्सेमा कति अङ्कको वृद्धि ? साल्ट टेडिङको शेयरमा सकारात्मक सर्किट - Dainik Samaj
नेप्सेमा कति अङ्कको वृद्धि ? साल्ट टेडिङको शेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं – धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से १४.५७ बिन्दुले बढेर दुई हजार ५२८.९५ मा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.०९ बिन्दुले बढेर ४४८.८९ मा पुगेको छ ।
कूल २०८ कम्पनीको एक करोड दुई लाख ७६ हजार ७१० कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब १४ करोड १८ लाख ९७ हजार १६९ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । आजको कारोवारपछि बजार पूँजीकरण रु ३४ खर्ब ९२ अर्ब ५९ करोड १४ लाख ८० हजार बराबर पुगेको छ ।
कारोवार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये सात उपसमूहको शेयर उकालो लाग्दा छ उपसमूहको शेयर भने ओरालो लागेको छ । बैंकिङ ६.६८, विकास बैंक ६.०५, वित्त ७.७४, उत्पादन ४२.३३, अन्य ११.४१ र जीवन बीमा ९८.७८ बिन्दुले घटेको छ । यस्तै, व्यापार ३४६.४६, होटल तथा पर्यटन १५५.५, जलविद्युत् १२९.८४, निर्जीवन बीमा १७४.०४, लघुवित्त ६९, सामूहिक लगानी कोष ०.०२ र लगानी उपसमूह १.०३ ले उकालो लागेको छ ।कारोवारका आधारमा नेपाल पूर्वाधार बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु ५२ करोड ६० लाख ९४ हजार ५७२ बराबरको कारोवार भयो ।